ဖိုင်လ်ဘာ စီးမန့်ဘုတ်် (သို့မဟုတ်) သစ်သားပေါ်သို့ ကြွေပြားခင်းခြင်း | Weber Cambodia
သစ်သား (သို့မဟုတ်) ဖိုင်လ်ဘာ-စီးမန့်ဘုတ် ပေါ်သို့ ကြွေပြားခင်းလိုပါက ၄င်းအား ဖေးမထောက်ပံ့မှု ပြုနေသော တည်ဆောက်ပုံကို ဦးစားပေးစဉ်းစား ပေးရပါမည်။ အောက်ခြေကြမ်းခင်းသည် အပေါ်ကနေထပ်ခင်းလိုက်သော အရာဝတ္ထု၏ ဝန်ဖိအားကိုခံနိုင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် အထူးမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် ကြွေပြားခင်းကျင်းရန် အထူးထုတ်လုပ်ထားသော အထူးကုန်စည်ကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။
1. ဝန်ဖိအားကြောင့် ချော်ထွက်ခြင်း
သစ်သား ကြမ်းခင်းများ (သို့မဟုတ်) စီးမန့်-ဘိုင်လ်ဘာ များပေါ်သို့ ကြွေပြားခင်းရာတွင် ဝန်ဖိအားကြောင့် ချော်ထွက်လေ့ရှိပါသည်။ ထောက်ပံ့မှု ပြုထားသော သစ်သား သို့မဟုတ် သံကိုယ်ထည် ဖရိမ်သည် ဝန်ဖိအားခံနိုင်ရည် လုံလုံလောက်လောက်ရှိရပါမည်။ ဆက်ကြောင်းများ၏ 30 x 30 စင်တီမီတာ ပတ်လည်တွင် ဝက်အူလှည့်ပေးခြင်းဖြင့် ကြမ်းခင်း၏ မာကျောမှုကို ဖြည့်တင်းပေး နိုင်ပါသည်။
2. ဆက်ကြောင်း၏ ကြံခိုင်ရည် လုံလောက်မှု မရှိခြင်း
ဆက်ကြောင်းများ၏ ကြံခိုင်ရည် လုံလောက်မှု မရှိပါက ရွေ့လျားမှုကြောင့် ကြွေပြားများ ကိုကွဲအက်စေနိုင်သည်။ မျက်နှာပြင် ပြန့်ကားခြင်း နှင့် ရွေ့လျားမှုများကို ကာကွယ်နိုင်ရန် ဆက်ကြောင်းတစ်လျှောက် စီလီကွန် စီးလန့်ဖြင့် ဖြည့်ပေးရပါမည်။
အပူချိန်နှင့် စိုထှိုင်းမှုတို့သည် ကျုံ့ဆန့်နိုင်မှုနှုန်းကို သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ သစ်သား နှင့် ဖိုင်လ်ဘာစီးမန့်ဘုတ် တို့သည် စိုစွတ်သောအခါ ပွတက်လာပြီး ရေငွေ့ပြန်သောအခါ ကျံု့ဝင် နေတတ်သည်။ ဘိုင်လ်ဘာစီးမန့်ကို အပြင်ပိုင်းတွင် အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း အပူချိန်ပြောင်းလဲမှု ပြင်းထန်မှုကြောင့် ကြွေပြားထပ်ကပ်သင့်ပါသည်။ သစ်သားနှင့် ဖိုင်လ်ဘာ စီးမန့်ဘုတ်ပေါ်သို့ ကြွေပြားကပ်ရာတွင် အတွင်းပိုင်းတွင်သာ ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။
30 x 30 စင်တီမီတာ ပတ်လည်တိုင်း အထောက်ပံ့လိုအပ်သော ဧရိယာတွင် ဘောင်ခတ်ခြင်းနှင့် အထိန်းကွပ်ပြုခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးရပါမည်။ဆက္ေၾကာင္းမ်ားကို အထူး စီလီကြန္ စီးလန္႔ ျဖည့္တင္းေပး ရပါမည္။
ဆက်ကြောင်းများကို အထူး စီလီကွန် စီးလန့် ဖြည့်တင်းပေး ရပါမည်။
စီးမန့်ဘိုင်လ်ဘာဘုတ် ကြားဆက်ကြောင်းများတွင် အနည်းဆုံး 10 စင်တီမီတာအကျယ် ဖိုင်လ်ဘာတိပ်ပြားများဖြင့် ဖုံးအုပ်ပေးရပါမည်။
ကြွေပြားကပ်ကော် မာဆလာသားအတွင်းသို့ ရေတိုးဝင်ခြင်းများကို ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် weber.prim2အောက်ခံဆေးရည်ကို သုတ်လိမ်းပေးရပါမည်။ ထိုသို့မပြုလုပ်ပေးပါက် ချော်ထွက်ခြင်းနှင့် ပွတက်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
ကျုံ့ဆန့်နိုင်သော ကြွေပြားကပ််ကော်ဖြင့် ကြွေပြားခင်းကျင်းခြင်း
နှာကြောင်းမဖြည့်မှီ ကြွေပြားကပ်ကော်ကို အနည်းဆုံး 24 နာရီအခြောက်ခံ ပေးရပါမည်
ကျုံ့ဆန့်နိုင်သော နှာကြောင့်ဖြည့်ကော် အသုံးပြုခြင်း
နှာကြောင်းဖြည့်ထားသော ဧရိယာကို ဖြတ်သန်းသွားလာမှု မပြုမှီ အနည်းဆုံး 24 နာရီအခြောက်ခံပေးရပါမည်
ရှိပြီးသားကြွေပြားပေါ် ကြွေပြားထပ်ကပ်ခြင်းနှင့် ...
အပြင်ပိုင်းလုပ်ဆောင်ချက်အတွက် ဝန်ဖိအားခံနိုင်ပြီး ကျုံ့ဆန့်နိုင်သော ...